नेपालमै पीपीई निर्माण
स्वास्थ्यकर्मीले लगाउने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पर्सनल प्रोटेक्सन इक्युपमेन्ट– पीपीई) स्वदेशमै बनाउन थालिएको छ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र, पाटन अस्पताललगायतले पीपीई निर्माण सुरु गरेका हुन् । कोरोना भाइरस संक्रमण आशंकामा आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिको निगरानी एवं उपचारका बेला स्वास्थ्यकर्मीले पीपीई लगाउँछन् ।
महावीर पुन नेतृत्वको केन्द्रले बुधबार पहिलो चरणमा पीपीईको नमुना तयार पारेको थियो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले नमुना परीक्षणको अवलोकन गरेका थिए । आफूले स्वीकृति पाएपछि काठमाडौंका दुई स्थानबाट पीपीई बनाउन थालेको पुनले जनाएका छन् ।
काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. कृष्णप्रसाद अधिकारीले स्वास्थ्यकर्मीको व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि लगाइने पीपीई स्वदेशमै निर्माण हुनु सुखद कार्य भएको बताए । ‘स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च बनाउनुपर्ने बेला हो यो’, रजिस्ट्रार डा. अधिकारीले भने, ‘पीपीई स्वदेशमै बन्नु सामान्य विषय हो । तर, अभावका बेला स्वदेशमै बन्नु स्वागतयोग्य कुरा छ । त्यसलाई धेरै हेरिरहनुपर्दैन । अहिले त पीपीईको संख्या नै कमी छ । ’ पाटन अस्पतालमा पनि पीपीईलगायत सामग्री उत्पादन भइरहेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को मापदण्डअनुसार सम्भावित बिरामीको प्रारम्भिक उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीले अनिवार्य पीपीई प्रयोग गर्नुपर्छ । काठमाडौंका वीर, त्रिवि शिक्षण, शुक्रराज ट्रपिकल सरुवा रोग अस्पताललगायतमै पीपीई अभाव देखिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको टोली बुधबार बिहान पाटन अस्पताल पुगेको थियो । अस्पतालमा चार जना व्यक्ति पीपीई बनाउन अहोरात्र खटिरहेको भेटिएको स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले बताए । धुम्बाराहीमा पीपीई निर्माण कार्य भइरहेकाले केही आवश्यकता पूर्ति गर्न सहयोग पुगेको मन्त्री ढकालको भनाइ छ ।
मन्त्री ढकालले बुधबार आयोजित प्रेस ब्रिफिङ कार्यक्रममा औजारजन्य सामग्री अभाव हुन नदिने अभियानमा जुटेको बताएका थिए । ‘पीपीईलगायत सामग्री हामी आफैं पनि निर्माण गर्न लागेका छौं’, उनले भने, ‘निर्माण पनि भइरहेका छन् ।’
यसका अतिरिक्त कीटजन्य सामग्री, थर्मल गन र अन्य आवश्यक सामग्रीका लागि सहयोगको आह्वान गरिने उनको भनाइ थियो । चीनमार्फत कतिपय सामग्री तीन दिनभित्र ल्याइने दाबी उनले गरेका थिए । यी सामग्री प्रदेश, जिल्ला, प्रभावित क्षेत्रसम्म मन्त्रालयको नेतृत्वमा लगिनेछ ।
स्वास्थ्यसचिव यादवप्रसाद कोइरालाले पनि बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा पीपीई गाइडलाइन बनाइदिएको बताए । ‘साधारण रुघाखोकी लागेको, ज्वरो आएको छ भने स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकले मुखमा मास्क, आँखामा चश्मा र टोपी लगाएपछि संरक्षण गर्छ’, उनले भने, ‘दोसो चरणमा पूर्ण पीपीईको व्यवस्था छ । ’ सरकारले फिभर क्लिनिक सञ्चालनका लागि मुलुकभर हब अस्पताल बनाएको र हरेकलाई १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।